Ra’iisul Wasaare Cumar Oo Cambaareeyay Weerarkii Shalay Ee Hotel Jazeera – Goobjoog News
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday Hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad halkaasi ka dhawaa.
War-saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa sidaan u qornaa:-
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii shalay lagu qaaday Hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho, isagoo tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid la rabay in lagu wiiqo horumarka iyo dib usoo kabashada dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isla markaana ahaa mid ka baxsan dhammaan dhaqanka diinta Islaamka iyo damiirka bani aadantinimada.
“Falkii Argagixiso ee lagu qaaday Hotel Jazeera wuxuu mar kale cadeeyey sida ay kooxdan waqtigeedu sii dhamaanayo uga go’an tahay daadinta dhiigga dadkeena qiimaha badan, laguna hakinayo nabadda iyo horumarka aan maanta haysano, waxaan u sheegayaa argagixisada weerarada noocan ah in marnaba aysan qaranka Soomaaliyeed ka leexin doonin waddada horumarka iyo dawladnimada”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid ayaa xusay in Ciidamadda Soomaaliyeed iyo walaalahooda AMISOM ay gobollada dalka ka wadaan howlgallo ballaaran oo Al-shabaab lagula dagaallayo, guulna laga gaaray, dhawaana laga sifayn doono deegaanada kooban ee ay ku sugan yihiin.
Ugu danbeyn, Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa tacsi u diray qaysaskii iyo saaxiibbaddii dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkan ka dhacay Hotelka Jazeera.
Qaraxii Daallo Airline: Billow ilaa Dhammaad
Ueoqxw dmfveo cialis 20mg cialis 20 mg
Vrpqsd oxeipm generic cialis cialis generic best price
Njycss dszqrz sildenafil generic generic for cialis...
Aduwjs lzrrbd buy viagra cheap online cialis 20 mg...
bulk order amoxicillin in usa https://amoxycillin1st.com/...
Tptzgt benxsj buy cialis buy cialis online safely...
Vilmau ojhemg Buy viagra no prescription cialis generic name...